Prof Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo noqdey Afhayeenka Barlamaanka Soomaaliya – idalenews.com
Prof Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo noqdey Afhayeenka Barlamaanka Soomaaliya
Doorashadii Guddoomiyaha cusub ee Barlamaanka ayaa lagu soo gabagabeeyey xarunta Dugsiga Sare ee Booliiska Xamar (Scuola Polizia) iyadoo ay ka qeyb galeen mas’uuliyiin ka tirsan dowladda iyo beesha caalamka si ay joobjoog uga ahaadaan qaabka ay u dhaceyso doorashada Afhayeenka cusub ee Barlamaanka.
Xubnaha cusub ee baarlamanka Soomaaliyeed ayaa waxaa ay maanta u ceedeyeen mushaxiinta u tartameysay xilka guddoomiyaha baarlamanka waxaana ka qeyb galey doorashada guddoomiyaha baarlamanka maas’uuliyiin ka socotay beesha caalamka iyo mudanyaal kor u dhaafaya 237 mudane.
Dhamaan Madaxdii ka socotey ka socotay beesha caalamka ayaa waxa ay ahaayeen wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, safiirada dowladaha Jabuuti Turkiga wakiilo ka socday jaamacada Carabta, iyo qaar ka mid ah saxiixayaasha Road-mapka.
Waxaa wareegii koobaad ee doorashada mushariixntii u tartameysay doorashada ayaa waxaa codka ugu badan helay Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo helay 119 cod Cali Khaliif Galeyr ayaa sidoo kale helay 77 Cod, waxaana Cabdi Xaanshi uu helay 23 Cod, C/rashiid Xidig uu ku guuleystay 10 Cod ugu dambeyntiina waxaa shan cod helay musharaxii kale.
Looma baahan in la qabto wareeg 2aad ka dib markii wareega labaad ee doorashada seddexda musharax ee kala ah,C/rashiid Xidig iyo Xasan Abshir ay u tanaasuleen labada musharax ee ku jirta kaalimaha koowaad iyo labaad.
Guddoomiyaha KMG ah ee baarlamanka General Muuse Xasan Cabdulle ayaa mar kale ku celiyay in labada musharax ee kala ah Cali Khaliif Galeyr iyo Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ay u tartamaan xilka guddoomiyaha Baarlamanka, waxaana ugu dambeentii goobta ka hadlay Dr Cali Khaliif Galeyr oo tibaaxay in uu u tanaasul Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari in uu noqdo guddoomiyaha Baarlamanka. Taasoo soo afjartey in la qabtey wareegii 3aad ee ay ku kala bixi lahaayeen 2da musharax ee ugu codka badney ee Prof Jawaari iyo Cali Khaliif Galeyr.
Maxamed Sheekh Cusmaan jawaari oo loo doortay guddoomiyaha cusub ee Baarlamanka oo hadal kooban ka jeediyay shirka ayaa uga mahad celiyay mudaneyaasha baarlamanka ee siiyay codkooda waxa uuna carabka ku dhuftay in guddoomiyaha Baarlamanka ee Kumeel gaarka ah uu sii wado doorashada ku xigeenada guddoomiyaha baarlamanaka waxaana haatan xubnaha baarlamanka ay ku howlanyihiin codeynta ku xigeenada guddoomiyaha baarlamanka.
Professor Jawaari oo ku guuleystey gudoomiyaha barlamaanka haystana codad ka badan 3 dalool 2 meel in ka badan
Jeylaani Nuur Iikar oo loo doortey Guddoomiye K/Xigeenka 1aad ee Barlamaanka.